के तपाई सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु हुन्छ ? एकपटक अबस्य पढ्नुहोस् | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य के तपाई सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु हुन्छ ? एकपटक अबस्य पढ्नुहोस्
के तपाई सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु हुन्छ ? एकपटक अबस्य पढ्नुहोस्
२०७५, ९ माघ बुधबार २१:५४
मोबाईलको प्रयोग रातीमा गर्नाले फोकसमा समस्या हुन्छ । यसले हामीमा ध्यान दिने र सुन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । डिप्रेसन यदि तपाई मोबाइल चलाईरहनु हुन्छ भने तपाईलाई डिप्रेसन भएको हुनसक्छ । thenewsnepal.info
Previous articleएकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यशाला सुरु
Next articleडिजिटल एक्सरे मेसिनबाट डेढ वर्षमा ९ हजारले पाए सुविधा